Eny na tsy misy
Mametraha fanontaniana ary valio: Eny na tsy misy
Impiry ianao no miandry valiny eny na tsia? Impiry ianao no mametraka fanontaniana? Saika ny tsirairay no mangataka fanontaniana vitsivitsy isan'andro ary te hahazo valiny amin'izy ireo. Matetika, voatery manao safidy ny olona. Eny na Tsia, ireo no valiny lehibe indrindra amin'ny fanontaniana maro. Ahoana no hahafantarana hoe valiny: eny na tsia, ho tsara ve izany? Raha misalasala ianao ary tsy afaka mifidy, dia izao no fotoana hitsidihana ny tranokalanay. Ary fantaro hoe inona no valiny azafady: eny na tsia. Ao amin'ny tranokala da-no.ru?lang=mg dia azonao atao ny manontany izay fanontaniana mety hovaliana eny, tsia. Ahoana ny fampiasana ilay tranonkala?
Soraty fotsiny ny fanontaniana ary tsindrio ny bokotra "Manontania". Aorian'ny segondra vitsy, ny valiny dia eny na tsia. Mazava ho azy, ny valiny dia nomena tsindraindray. Ary tsy afaka matoky tanteraka an'io fomba io ianao. Na dia izany aza! Ny asa fanompoana valiny ENY no manampy ny handresy ny tsy fanavakavahana ary handray fanapahan-kevitra tsara. Raha nahazo ny valiny NO, saingy te-hahazo ny valiny YES, dia hanome toky anao izany. Raha te-hahazo ny valiny TSIA ianao, saingy nahazo YES ianao, dia hanery anao indray ianao hanontany ny zavatra hafa ary handray fanapahan-kevitra mitovy ho anao.
Na ahoana na ahoana, ny servisy YES / NO dia mahagaga ary manampy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Na dia nomena tamim-pahamarinana tanteraka aza ireo valiny. Ary diso matetika izy ireo. Fa ianao ihany no manao safidy. Ny tranonkala "YES na NO" dia manampy hahafantatra izay safidy hatao: eny na tsia.